“Waa muhiim inaan ku guuleysano horyaalka Premier League” – Maxamed Saalax – hareerley News
Weeraryahanka kooxda Liverpool ee Maxamed Saalax ayaa sheegay inuusan ka caroon doonin haddii uu ku guuldareysto abaal-marinta kabta dahabka ee gooldhalinta Premier League, laakiin waa haddii taasi badalkeeda ay Reds ku guuleysaneyso horyaalka.
Maxamed Saalax ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Dabcan, waxaan doonayaa inaan ku guuleysto abaal-marinta gooldhalinta ee horyaalka Premier League xili ciyaareedkii saddexaad ee xiriir ah”.
“Laakiin muhiimada koowaad ayaa waxey tahay in Liverpool ay ku guuleysato koobab badan, gaar ahaan horyaalka Premier League”.
Mar wax laga weydiiyay Saalax inuu u lumin karo abaal-marinta gooldhaliyaha ugu sareeya, hadii taasi badalkeeda ay Liverpool ku guuleysaneyso Premier League ayaa wuxuu ku jawaabay:
“Haa, dabcan, laakiin waxaan markale ku guuleysan karaa kabta dahabka xilli ciyaareedka soo socda”.
Si kastaba ha noqotee, Maxamed Saalax ayaa dhaliyay 44 gool ee ah tartamada oo dhan xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay garoonka Anfield ee 2017/18, iyo 27 gool uu dhaliyay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ee 2018/19.